Chiller Vagadziri - China Chiller Fekitori & vanotengesa
LHVE Series Permanent Magnet Synchronous Frequency Shanduko Screw Chiller
Yakakwira-inomhanya zvachose magineti e synchronous inverter mota Iyo yekutanga simba repamusoro-soro uye inomhanya-mhanyisa PMSM inoshandiswa kune ino centrifugal chiller. Simba rayo rakakwirira kudarika 400 kW uye kumhanya kwaro kutenderera kuri pamusoro pe18000 rpm. Kugona kwemotokari kuri pamusoro pe96% uye 97.5% kusvika pakukwirira, kukwira kupfuura yenyika yegiredhi 1 chiyero pane mota yekuita Iyo compact uye yakapepuka. 400kW inomhanya-mhanya PMSM inorema zvakafanana ne75kW AC induction mota. Nekutora inonamira refrigerant pfapfaidzo kutonhora tekinoroji ku ...
Iyo mhando yemvura-yakatonhorera screw chiller ine mafashama sikuru compressor iyo inogona kuve yakabatana kune ese marudzi e fan fan coil unit kuti uone kutonhorera kune makuru ehurumende kana maindasitiri zvivakwa. 1.Precision tembiricha yemvura yekudzora nekutenda kusingagadzikane chinzvimbo chinogadziriswa kubva pa25% ~ 100% (imwechete comp.) Kana 12.5% ​​~ 100% (mbiri comp.). 2.Higher kupisa kupisa kwekushandira nekuda kwemafashama evaporating nzira. 3. Kubudirira kwepamusoro pasi pemutoro wakasarudzika nekuda kwekufananidza mashandiro dhizaini. 4. Kuvimbika kwepamusoro kwemafuta ...